fibrillation Ventricular - kuphazamisa umsebenzi kagesi ventricular myocardium. Phakathi atrial fibrillation (noma kulokoza) ventricular ukusikwa zamabhasi, okuholela okukhipha inhliziyo wayeka, okungukuthi, kwegazi, emishinini yokuphefumula, kanti isiguli ilahlekelwa ukwazi. I ECG eqoshiwe ngezikhathi ezinjalo okungajwayelekile, njalo oscillations kagesi, izinguquko kakhulu kabani kwawo namandla awo. Uma ngezikhathi esinjalo isiguli ngokushesha hhayi ukuchitha labagula zenhliziyo, kungenzeka, akazange uphinde ukwazi ekufeni.
Lapho senhliziyo ngo-70% of amacala zenzeka fibrillation ventricular. Ngaphezu kwalokho, ngo-80% amacala imbangela yokufa engazelelwe ventricular fibrillation u. Amadoda isifo ngezinye izikhathi ezintathu kakhulu ukudlula abantu besifazane.
Iningi iziguli lesi sifo eba khona isifo senhliziyo noma yimuphi omunye iziyaluyalu non-inhliziyo. Izizathu ivela khona kungaba:
- isifo senhliziyo,
- osuke usuvulekile zenhliziyo ;
- zenhliziyo hypertrophic;
- umuntu abanjwe ugesi;
- hypoxia futhi lactic;
- ukuphuza imithi ethile.
Ukuthuthukiswa fibrillation libuye likhuthaze ezicini eziningana ukuthi ukunciphisa umsebenzi kagesi we myocardium. Lezi zinto zibandakanya ukwanda Usayizi inhliziyo, bandisa inkonzo enozwela khona foci of ukonakala futhi sclerosis ohlelweni conduction futhi contractility esivimba amanzi.
Njengoba ventricular fibrillation kwenzeka angesabi ezimweni eziningi, inkinga yayo enkulu ngokungabi bikho ukwelashwa okuphuthumayo ngukufa. Ukuze sikwazi ukuletha isiguli imizwa kudinga defibrillation. Defibrillation - uhlobo "zeroing" inhliziyo amacala.
Okunye ukuxakeka zihlanganisa nenshisekelo inyumoniya, kanye umonakalo wamaphaphu ukuthi kungenzeka emva ukwa lwezimbambo ngu yokusiza umuntu ukuba aphefumule.
Phakathi ukuboshwa inhliziyo, fibrillation ventricular, okungukuthi, cishe ngaso sonke isikhathi eba ischemia esivimba amanzi, okungase postresuscitation nezinkinga ezifana arrhythmia, isilethikusebenza, noma ukwahluleka electromechanical umsebenzi inhliziyo.
Ngokuvamile in iziguli emva ventricular fibrillation waphawula kanye nezinkinga neurologic. Ngokwesibonelo, encephalopathy anoxic, okuyinto is phetho hypoxia cerebral ngesikhathi kuhlaselwa lesi sifo kungase kubonakaliswe ngu syndrome convulsive futhi equlekile. Serious umonakalo ebuchosheni lapho yokusiza umuntu ukuba aphefumule inhliziyo ziyimpumelelo akuvamile. Lokhu kungenxa, ngokuyinhloko, yokuthi ngokungabi bikho izinyathelo yimpumelelo futhi omuhle senhliziyo Fundzisisa inhliziyo lesiguli ngeke ukuqala.
Ukwelashwa, njengoba kushiwo ngenhla, yakhiwa yokusiza umuntu ukuba aphefumule ngempumelelo isiguli. Ezinye izindaba zika-senzo oqabulayo abasebenzi bezokwelapha ukuze kuvinjelwe lesi sifo noma nokugcinwa kanye nokubuyiselwa amandla lesiguli.
Ukwelashwa of fibrillation atrial akuyona ethize kanye akahlukile ukwelapha ventricles. Ngo labagula, zonke iziguli ngemva kokuhlaselwa yinhliziyo ngesikhathi compulsorily libonisa yokwelapha i-oksijini, okusho ephulukisa umoya-mpilo.
Azikho zokwelapha eziqondile okubangelwa ukuhlaselwa encephalopathy. Kulezi zimo, bezempilo kudingeka bachithe kuphela yokwelapha lingaze, okuhloswe ngalo ukunqandwa kokushayisana hypotension futhi hypoxia, kanye iziyaluyalu carbohydrate electrolyte umzimba umzimba.
Eye ukukhathala ububomvu amajwabu amehlo
Umongameli wamanje Portugal: Biography nesithombe
Vasiliy Viktorovich Tihonov, Umqeqeshi hockey: Biography, impumelelo, imbangela yokufa